Uyilo lomxholo wemveliso yeglavu yelatex
Iimpawu zemveliso yeglavu ye-PVC
Umatshini unokwenziwa ngendlela enobuntu ngokweenkqubo ezahlukeneyo zokuphilisa kunye nokubumba. Inkqubo inengqiqo kwaye inkqubo yeglue yokulinganisa ngokuzenzekelayo yenza ukuba imveliso izinzile, ukutyabeka ubukhulu kufane, ubude bufane, akukho sag, iqondo lobushushu liyinto efanayo, kwaye imveliso iphezulu. Iimpawu ezinje ngokudiliza ngokulula.
Imveliso yezixhobo zamandla
I-oveni yamkela umgaqo wokusasazwa komoya oshushu ukwenza ubushushu bangaphakathi beyunifomu ye-oveni, kwaye izinto zokugquma ezikwizinga eliphezulu zisetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba ubushushu abulahleki, ngaloo ndlela kuphuculwa ukusetyenziswa kobushushu bomatshini. Ukufudumeza umatshini kwamkela inkqubo yolawulo lobushushu oluzenzekelayo kunye nolawulo lwentsebenzo ephezulu yokuphucula ukuchaneka kolawulo lobushushu, ngaloo ndlela kuphucula izinga lokupasa kweemveliso.
Iiglavu ze-PVC zenziwe nge-polyvinyl chloride ngenkqubo ekhethekileyo. Iiglavu azina-allergen-free, zingenampuphu, zivelisa uthuli olusezantsi, kwaye zinomxholo ophantsi we-ion, kwaye awuqulathanga ziiplasticizers, ii-esters, iioyile zesilicone kunye nezinye izithako. Banokuchasana okunamandla kwemichiza, ubhetyebhetye obuchukumisayo kunye nokuchukumisa, kwaye bakulungele kwaye banokunxiba. Ukusebenza kwe-anti-static, kunokusetyenziswa kwindawo engenalo uthuli.
Egqithileyo Umgca wemveliso isikhuseli zilahlwe
Okulandelayo: Umgca wemveliso iiglavu zilahlwe
PVC Camera Iziqhano Camera
PVC Iziqhano M-Ubungakanani Production Line
PVC Iziqhano S-Ubungakanani Production Line
PVC Zokhuseleko Iziqhano Machine